Taariikhda Kacdoonka Suufiyadda Soomaaliya iyo Damacooda Siyaasadeed!! | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qabsashada Ahlu-sunna Axaddii ee magaalada Dhuusamareeb kadib, Waxaa soo ifbaxay su’aalo badan oo ku saabsan Damaca kooxdan iyo hankooda siyaasadeed, hadaba waxaan halkan kusoo gubin doonaa wax walba oo ku saabsan kacdoodonka Suufiyada Soomaaliya.
Waa Maxay Suufiyada:
Cilmiga Tasuwufka waa Dariiqad u kala baxda Dariiqooyin: Sidaa Qaadiriya, Saalixiya, Axmadiya iyo Mowliidiya, waa Waddo uu Aduunka usii marayo Rabigiisa, waxay leeyihiin Culumo Caan ah sida Sheikh Cabdi Qaadir Jiilaani, Xasan Al-Basr iyo Imaam Al-Nawawi.
Waxaa jiro kooxo aad ugasoo horjeeda oo ku tiriya Suufiyada inay tahay Bidco halka qaar ay ku doodaan inay Aaminsanyihiin: Khuraafaadka, Cilmu-Geybka, Qubuurta oo la Tabaruko.
Culumada Salafka waxay qabaan Suufiya waa Bicdo Dakhiil ku ah Islaamka waayo waxay Barakystaan Awliyo….waxay sidoo kale ku Eedeeyaa Mowlidka, Arbiciinka loo dhigo dhimasho kadib.
Suufiyada Hubeysan iyo Soomaaliya:
Suufiyada waxaa ay hoos tagi jireen golaha culimada Soomaaliyeed wixii ka horeeyay 91-kii, xiligaas kadib Suufiyada waxaa ay noqotay labo garab, koox qeyb ka noqotay Siyaasadda dalka lana safatay Caydiid iyo hogaamiyaashii kale iyo koox ku hartay Mowlacyada iyo nidaamkii looga bartay Suufiyada.
Suufiyada waxaa ay taageereen midowga Maxaakiimta Islaamiga iyo dagaalkii looga soo horjeeday Hogaamiye kooxeedka Muqdishu 2006-dii, lakin koox hobeysan ma aheyn.
Suufiyada waxaaay ilko yeelatay oo qoryo qaateen 2009-kii, Xiligaas oo Muqdishu iyo koofurta Soomaaliya ay la wareegeen Islaamiyiinta kasoo horjeeda fikirka Suufiyada, xitaa waxaa la burburiyay Qubuuro ay u siyaaro tagi jireen.
Qabuurahaas waxaa ka mid ahaa Qabriga Sheikh Ali Ibaar ee magaalada Galhareeri iyo Qabriga Sheekh Muxyudiin Cilli, Sheekh Cali Biyo Maaloow ee Muqdishu iyo Qabriga Sheekh Cali Cabdulle ee duleedka magaalada Muqdishu iyo qubuuro kale oo Suufiyada ay siyaaran jireen.
Waxaa kaloo Al-shabaab ay Suufiyada kala wareegtay Masaajidyo badan oo gacantooda ku jiray taasi oo keentay in Suufiyada ay halis dareemaan.
Sida uu sheegay Gudoomiyaha Dalladda Culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad, Suufiyadda waxaa ay hakiyeen xubinimadooda ama ka mid ahaanshiyadooda Dalladda Culimada iyagoo aan wax sabab ah sheegin.
January 2009-kii kadib dhacdadii Muqdishu, Ahlu-sunna waxaa ay saldhig ka sameysatay Gobolada dhexe, dagaalo badan ayaa iyaga iyo Al-shabaab ku dhex maray magaalooyinka Guriceel , Wabxo, Dhuuso-Mareeb iyo Cadaado.
Dagaal Gobolada dhexe ku dhex maray Ahlu Sunnah walJama’a iyo Al-shabaab 22 February 2009 waxaa ay Ahlu sunna la wareegtay magaalada Cadaado.
Dagaalada toos ah iyo kuwoo kale oo ku dhuffo oo ka dhaqaaq ah ayaa dhex marayey Ahlu-Sunna iyo Al-shabaab waxaa ay socotay ilaa 2014-kii, Ahlu Sunna waxaa ay ku xoogeysatay gobollada dhexe iyagoo bilaabay gorgortan.
Ahlu-sunna markii ay qabsatay magaalooyin badan oo gobollada dhexe ah, waxaa ay isku basashay garab siyaasadeed iyagoo bilaabay gorgortan siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Maamulka Ahlu-sunna waxaa uu ka mid ahaa kooxihii ka qeyb galay 24- December 2011 Shirkii Garoowe, Waxaa shirkan isugu yimid Dowaladda KMG, Puntland, Galmudug iyo Ahlu Sunna, shri afar cisho socday, iyo 18 Febraayo 2012 Garoowe 2 iyo Road map la isku afgartay in Federaal wax lagu saleeyo, Sheekh Shariifkii oo shirka xiray ayaa sheegay in KMG laga baxay.
Wixii ka dambeeyay 2014-kii, Ahlu-sunna waxaa ay dagaal la gashay Dowladda Federaalka, dagaalka waxaa uu ahaa mid awoodeed, Kooxda Ahlu Sunna, waxaa ay noqotay awood aan la dhayalsan Karin iyagoo qeyb ka noqday dhamaan heshiisyada looga arinsado xaaladda gobolada dhexe.
July 30, 2014: Ahlu-sunna waxaa ay qeyb ka aheyd Saxiixayaasha Heshiiska Maamul u sameynta Gobolada Dhexe ee Soomaaliya, Munaasabada heshiiskani lagu kala saxiixanayay oo lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Qaranka ayaa waxaa ka soo qeyb galay Mas’uuliyiin ka socotay gobolada Dhexe, Siyaasiyiin, mas’uuliyiin ka socotay QM, Midowga Yurub, Midowga Africa, Wasiiro ka tirsan Dowladda, Ra’isul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/weli Sheekh Axmed Maxamed, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Marti sharaf kale.
Bishii December 2014-kii ilaa Febraayo 2015-kii, waxaa dagaal uu Guriceel ku dhex maray Ahlu-sunna iyo Dowladda Federaalka, ugu dameyntii waxaa magaalada tagay Wafdiga Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya.
March 4, 2015: Heshiisyo hor dhac ah ayaa laga gaaray xiisada colaadeed ee ka taagan Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, taasi oo udhaxeysa ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Garabka Ahlu Sunna ee haysta Magaalada Guriceel.
Wafdiga Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya ee habeenkii labaad ku hooyday Magaalada Guriceel iyo masuuliyiinta Ahlu Sunna ayaa isla gartay heshiisyo hor dhac ah oo xal u noqonaayo colaada ka taagan Gobolkaasi.
Hadda waxaa Cadaado ka socda shir maamul looga sameynayo gobolada dhexe(Mudug iyo Galgaduud), shirka waxaa uu galay wajiga labaad, waxaa lagu wadaa in natiijada shirka ay meesha ka saarto Maamulada halkaas ka jiro oo Ahlu-sunna ay ka mid tahay.
Shirkaas kadib Ahlu-sunna waxaa ay noqon doontaa Taariikh, lakin qabsashada kooxdan ee Dhuuso-Mareeb Axaddii waxay ay tusineysaa damac kale oo kooxda Ahlu-sunna ku jira.
June 7, 2015: Waxaa dagaal aan dhiig ku daadan Magaalada Dhuuso Marabeeb kula wareegay maamulka Ahlu-sunna, lama oga sababta.
Qabsashada Ahlu sunna ee Dhuusomareeb maxay ka dhigan tahay?
Kacdoonkan Suufiyada ee Soomaaliya mala soo afjari doonaa?
Waa side Mustaqbalka Suufiyadda Hubeysan ee Soomaaliya?
Ma aqbali doonaan Natiijada kasoo baxda shirka Gobolada dhexe ee Cadaado?
Afeef Wardoon.net Mas uul kama ahan qoraalkan qofka kusaxiixan ayay gaar u tahay